Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mursal oo hambalyo ku aaddan sanad guuradii 51-aad ee kasoo wareegatay aas-aaskii Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed u diray. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mursal oo hambalyo ku aaddan sanad guuradii 51-aad ee...
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mursal oo hambalyo ku aaddan sanad guuradii 51-aad ee kasoo wareegatay aas-aaskii Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed u diray.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa hambalyo ku aaddan sanad guuradii 51-aad ee kasoo wareegatay aas-aaskii Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed u diray sarreeyayaasha, saraakiisha,saraakiil xigeenadda,Alifleyda iyo dableyda Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sheegay in ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay door weyn ku leeyihiin amniga iyo xasilinta guud ahaan Dalka, isagoo guud ahaan ciidanka Asluubta Soomaaliyeed iyo hogaankooda u rajeeyay horumar.
Sidoo kale Wasiirka Caddaalada XFS Soomaaliya, Cabduqadir Maxamed Nuur ayaa isna hambalyo ku saabsan sanad guurada 51 aad aas aaskooda u diray ciidanka asluubta Soomaaliyeed.
Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa Maanta u dabaal degaya sanad guuradii 51-aad ee kasoo wareegatay Markii la aas-aaskay Ciidanka, waxaana Munaasabad loo dhigi lahaa loo baajiyay sababo la xiriira Cudurka halista ah COVID-19.
Previous articleWeerar lagu laayay arday Bas saarneed oo ka dhacay gobolka Tigray..
Next articleGuddoomiyaha Baarlamaanka Carabta oo Qeylo dhaan ka muujiyay Rabshadihii Muqdisho ka dhacay maalmo ka hor..